XOG+WARBIXIN: Xaaladda TUKARAQ waa boog ku taala Doorashada Puntland, Maxayse ka damacsan tahay Xukuumada M/weyne Gaas? – Puntlandtimes
XOG+WARBIXIN: Xaaladda TUKARAQ waa boog ku taala Doorashada Puntland, Maxayse ka damacsan tahay Xukuumada M/weyne Gaas?
GAROOWE(P-TIMES)- Culeys siyaasadeed iyo Amni ayay ku haysaa doorashada Puntland xaaladda kataagan gobalka Sool, gaar ahaana Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan 8 bilood ee lasoo dhaafay ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxaana markasta cabsi laga qabaa dagaal ka dhici karra.
Puntland waxay hadda gashay jawiga doorashada Madaxtooyada iyo baarlamaanka oo dhici doona bisha Jan 2019, waxaana ilaa hadda si weyn loogu foogan yahay hab dhaqanka Madaxtooyada Puntland ee kuwajahan xaaladda gobalka Sool, oo wali saan-saan dagaal ka jirto.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay arirmahan, mar uu ka qeybgalayay shirkii Midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa cadeeyey in aysan suuragal aheyn in uu doorashada uga faa’iideysto dagaalada gobalka Sool.
Musharaxiin iyo Siyaasiinta la socda xaaladda mandiqada Puntland ayaa welwel ka muujinaya marxaladda taagan iyo hab dhaqanka dawladda ee kuwajahan xaaladda Sool, waxaana cabsi laga qabi karaa bilaha ugu dambeeya ee Xukunka Madaxda maanta ay sameeyaan dagaalo abuuri kar marxalad kale.
Guddiga Difaaca ee Xukuumadda ugu xilsaaran arrimaha Sool, waxay dhawaan ku dhaarteen cod dheerna ku sheegeen in lasoo celinayo Tukaraq iyo gobalkaas oo dhan, laakiin hadda oo doorashada ka dhiman tahay waqti kooban, wali ma jiraan ficilo muujinaya soo celinta gobalka Sool.
11 sanno ayay gacanta Puntland ka maqan tahay Laascaanood, Somaliland-na waxay sameynaysaa dhawrkii sannaba in ay dhaqdhaqaaq ciidan ku qabsato gobalka Sool, waxaana hadda muuqda Saan-Saanta la wareegida deegaano hor leh, xili Tukaraq ay qabsatay bilowgii sannadkan.
Maalmihii u dambeeyey xog soo baxday ayaa sheegaysa in Xukuumadda Puntland ay qorsheynayso dagaal ay qaado maalmaha ama bilaha nagu soo aadan, kaas oo shaki laga muujinayo in hoos loogu dhigayo loolanka doorashada Madaxtinimada Puntland, taas oo haddii ay dhacdo halis kale ka dhigan.
Madasha ay kumideysan yihiin Musharaxiin iyo siyaasiin horey xilal uga soo qabtay Puntland waxay walaac ka muujiyeen dagaal doorasho, waxayna sheegeen in siyaasad dagaal lagu gala uu mandiqada u horseedi karro waji kale, waxayna si rasmi ah u cadeeyeen in waajibaadka koowaad maanta saaran yahay Xukuumadda Madaxweyne Gaas.
Maxaa usheegi weydeen waxay damacsan tahay xukuumada Gaas idinkaa guri la degen oo shilimaan dhaafsaday dhulkiinii,
Saxaafada waxaa la rabaa in si anshax ah ay waajibka dhulkooda u gudutaan oo sheegaan dhaliilaha iyo wixii fiican ee la qabtayba. Dadka iyo maamulkana laysku xiro si looga gudba hadba duruuftii taagan.